बैंकले अनुमानका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेर गल्ती गरे « Bizkhabar Online
26 December, 2017 10:45 am
तरलता अभाव देखिन थालेपछि बैङ्कहरु यतीबेला निक्षेप संकलनमा जोड दिइरहेका छन् । यो गतिविधिले कर्जा नपाउने भय अर्कोतिर खडा भइदिएको छ । सँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने आशंका उत्तिकै छ । बदलिएको यो वित्तीय क्रियाकलाप र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले नेपाल विकास बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुमा अहिले पुनः निक्षेप तानातानको स्थिती सिर्जना भएको छ । विकास बैंकतर्फ अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा हरेक बर्ष नै कहिले उच्च तरलता र कहिले तरलता अभावको अवस्था देखिएको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा यो अवस्था आउनु राम्रो होइन । बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ, निराकरणका उपाय के हुन ? यस्तो उत्तर अहिले बैंकरसँग नै छैन ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको कुरा ल्यायो तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । यदि त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको भएपनि केही हदसम्म सहज हुने थियो । अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा हामी बैंकर तथा नियमनकारी निकाय दुवै दोषी छन् । यसरी अधिक तरलता र न्यून तरलताको अवस्था आउनु समग्र अर्थतन्त्रकै लागि हानिकारक हो ।
तरलता अभाव वा अधिक तरलता बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रकै लागि नराम्रो भन्ने त बारम्बार सुनिदैं आएकै हो । यो किन भइरहेको छ अथवा यसका कारण के हुन् ?
यसमा बैंकरहरुले अनुमान वा उनीहरुले बनाउने योजना सहि नहुनु हो । गत वर्ष पनि लगानी योग्य पूँजीको चाप बढेको थियो तर जेठमा आईपुग्दा केही सहज भयो । त्यसयता बैंकहरु लगानी विस्तारमा एकदमै फोकस भए । बैंकहरुले असोज कात्तिकसम्म जति बचत संकलन भएको थियो त्योभन्दा बढी लगानी गरे ।
त्यतिबेला बैंकहरुले बजारमा तरलता भएको र समयै सरकारी ढुकुटीको खर्च भएर बजारमा थप तरलता आउछ भन्ने आधारमा लगानी गरेका थिए । तर सरकारले त्यहिं समयमा बजारबाट एक खर्ब रुपैयाँ उठाइदियो । बैंकरले भविष्यमा आउने जोखिमको अनुमान लगाउन नसक्नु र बचत संकलनको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाह गर्नु नै अहिलेको मुख्य कमजोरी हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ढुकुटी ताकेर बस्ने होइन आफैले बचत संकलन गरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ भने तपाईहरु सरकारले खर्च नगर्दा बजार तरलता अभाव भयो भनिरहनु भएको छ । यसमा दुवै पक्षको फरक फरक धारण छ नि ?
केहीहदसम्म राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा पनि ठिक होला । तर, यही समयमा सरकारले बजारबाट एक खर्ब रुपैयाँ उठाइदियो । पहिले चैततिर सरकारले बण्ड जारी गरेर बजारबाट पैसा संकनल गथ्र्यो तर अहिले मंसिर भित्रै उठाइदियो । यो पनि एउटा कारण हो ।
बैंकहरुले अनुमानका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नु पनि अर्को गल्ती गरे । उनीहरुले जुन अनुपातमा निक्षेप संकलन गरे सोही अनुपातमा कर्जा प्रबाह गर्नुपर्नेमा बढी नाफा कमाउने लोभमा बढी कर्जा प्रबाह गरे । यसमा बैंकहरु दोषी छन् । यसमा कुन बैंक दोषी कुन ठिकभन्दा पनि समग्र बैंकले यसको जिम्मा लिनु पर्छ । बैंकर भएर बैंक संचालन गर्दा यो हतारिएर वा आत्तिएर गर्ने व्यवसाय होइन । तुरुन्तै लगानी गरेर तुरुन्तै नाफा कमाउने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
अहिले बैंकहरुले मोलबढावढमा निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् । यहि अवस्थामा निक्षेप तानातान गर्ने हो भने अबमा दिनमा नेपालको बैंकको अवस्था कसरी अघि बढ्ला ?
म त भन्छु ब्याजदर बढ्दा सर्वसाधारणलाई फाइदा हुन्छ । बैंकहरुले छोटो अबधिमा निक्षेपमा संकलन गर्दा ग्राहकले लिने कर्जामा ब्याज बढ्दैन । यसले बैंकहरुको स्प्रेड घट्छ भने आम जनतालाई फाइदा पुर्याउछ । तर, ब्याजदर बढेका कारणले सेवाग्राहीले कर्जा नै लिन नसक्ने अवस्था चाहिँ आउनु भएन । त्यसो हुँदा सेवाग्राहीका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पुर्याउँछ । ऋणीले ऋण लिन सक्ने, बैंकले पनि आफ्ना लगानीकर्तालाई नाफा खुवाउन सक्ने र जनताले पनि उचित ब्याज पाउने गरी ब्याजदर बढ्दा आत्तिनुपर्ने छैन ।
मेरो विचारमा यो ब्याजदर अल्पकालिन हुन सक्छ । यो पुस मसान्त समग्र कर्पोरेट क्षेत्रले सरकारलाई राजस्व बुझाउने बेला हो । सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट पैसा तानिरहेका छन् । त्यसले गर्दा अहिले अभाव भएको हो दुई तीन महिनामा सहज हुनसक्छ ।
नेपालको बैंकिङ अभ्यास हेर्ने हो भने बैंकहरुले बढी ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्दा सेवाग्राहीसँग लिने कर्जाको ब्याज पनि त्यसै अनुसार बढेको पाइन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर फेरि उद्योग व्यवसायमा पनि पर्छ नि हैन र ?
केही समय अघि ५÷६ प्रतिशत रहेको फिक्स डिपोजिटको ब्याज अहिले बढेर ११/१२ प्रतिशत पुगिसक्यो । सोही अनुपातमा बैंकहरुले ऋणीसँग लिने कर्जाको ब्याज त बढेको छैन । अहिले बर्षमा दुई पटकभन्दा बढी ब्याज बढाउन पाईदैन । राष्ट्र बैंकको कसीका कारण बैंकले निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिए पनि ऋणीसँग बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । जुन अनुपातमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्यो त्यहि अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर बढ्दैन र बढाउन सम्भव पनि छैन ।
कतिपय बैंकले दुई बर्षसम्म ब्याज बढाउदिन भनेर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै घर कर्जा, अन्य दिर्घकालिन कर्जामा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेका छन् । यो अवस्थामा निक्षेपमा ब्याज बढ्यो भनेर ऋणीको टाउकोमा भार थुपार्न पाइएन । अहिलेको अवस्था गत बर्षभन्दा फरक पनि छ । गतबर्ष कलको निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता निक्षेपमा सम्बन्धित संस्थाको बचतको न्युनतमभन्दा बढी ब्याज दिन पाइदैन भनेको छ । तसर्थ अहिले कल एकाउण्टको ब्याजदर अघिकतम साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । अहिले निक्षेप तान्न कल एकाउण्टको ब्याज बढाउने हो भने बचतको पनि ब्याज बढाउनु पर्यो । यदि त्यसरी ब्याज बढाएर निक्षेप तान्ने हो भने बैंकको खर्च एकदमै ठूलो आकारमा बढ्नेछ । अहिले बैंकले फिक्स डिपोजिटमा मात्र केन्द्रित रहेर ब्याजदर बढाइरहेका छन् । फिक्स डिपोजिटमा मात्र ब्याजदर बढाइरहेको भएकाले यो दर अझै माथी जानसक्ने अवस्था छ ।
अहिले कतिपय बैंकले कर्जा समेत प्रबाह गर्न छाडिसकने भन्ने गुनासो आइरहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा र निक्षेपको अनुपात हेर्दा आगामी दिनमा कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
समग्र रुपमा भन्दा अधिकांश बैंकहरु धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । धेरै बैंकहरु आफ्नो लिमिटमा पुगिसकेका छन् । तर, यो अवस्था सबैमा लागू हुँदैन । उदाहरणका लागि महालक्ष्मी बिकास बैंकको कुरा गर्नुहन्छ भने हामी ग्राहकले माग गरे अनुरुप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले बाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् तर हामी त्योभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रबाह गर्न तयार छौं । कर्जा विस्तारको माथिल्लो सिमामा पुगेका बैंकले दिन सक्दैनन भने निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह कम गरेका बैंकले जति पनि दिन सक्छन् । बैंकले कर्जा दिनै रोके भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । ग्राहकले सहज रुपमा कर्जा पाउँछन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाको गत बर्षको प्रथम त्रैमासिक र यस बर्षको सोही अबधिको नाफा हेर्दा अवस्था खस्किएको हो ?
खस्किएको होइन अवस्था झन् मजबुत भएको हो । नाफा मात्र केही कम भएको हो । कर्जामा ब्याजदर बढी लिएर ऋणीलाई मार पारे र कम ब्याज लिएर लगानीकर्तालाई मुनाफा दिन सकेनन् भन्ने दोहोरो मापदण्डबाट बैंकलाई हेरिनुहुन्न । तर, बजार धेरै प्रतिस्पर्धात्मक भइसकेको छ । पहिला बैंक वित्तीय सस्थाले जुन रुपमा आम्दानी गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरे अबका दिनमा त्यो सम्भव छैन । गत बर्ष साउन भदौदेखि जुन रुपमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्यो त्यसको असर बैंक वित्तीय संस्थाले यस बर्षको पहिलो त्रैमासमा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा देखिएको हो । नाफा घट्दैमा बैंक खराब भयो भन्न मिल्दैन । उसले वितरण गर्ने लाभांशमा केही कमी हुनसक्छ तर सबै बैंकले १५ देखि २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्छन् । बैंकमा लगानी गरे २० प्रतिशत मुनाफा पाउनु भनेको नराम्रो होइन ।
महालक्ष्मी बैंककै कुरा गर्ने हो भने पनि गत बर्षको पहिलो ३ महिनाको तुलना गर्दा १ करोड रुपैयाँ नाफा घटेको छ । अबका दिनमा यसलाई बढाउन केकस्ता योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो अवस्था अन्य बैंक वित्तीय संस्थाको भन्दा अलि फरक छ । हामी २/३ वटा ठूला विकास बैंक मर्ज भएर एउटा बनेका छौं । यसको कन्सुलिटेशन गर्न बाँकी छ । यो आर्थिक बर्ष बैंकको नाफा भन्दा पनि ब्यवस्थापनलाई बढी केन्द्रित गरेका छौं । भिन्न भिन्न संस्थाबाट मर्ज भएर आएका कर्मचारीको ब्यवस्थापन, फरक फरक नीतिलाई समायोजनमा लागिपरेका छौं । हामी चुक्ता पूँजी, निक्षेप तथा कर्जा विस्तार, शाखा सञ्जालको आधारमा सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक हौं । अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकसँग ऋणीसँग असुल गर्नुपर्ने ब्याज तथा कर्जा धेरै छन् । केही समय मर्जरका कारण अन्यौलमा परिएको हो । हामी आगामी आर्थिक बर्ष सम्ममा एक नम्बरको विकास बैंकको रुपमा स्थापित हुनेछौं भने सोही अनुरुप नाफा पनि कमाउनेछौं ।
तर, वित्तीय विवरण हेर्दा बैंकको कर्जा विस्तार गत बर्षकोभन्दा धेरै घटेको छ । तपाईहरु सुरक्षित अवतरण गर्नुभएको कि कर्जा विस्तार गर्न नसकेको ?
हामी सेफ ल्याण्डिङमा बसेका होइनौ कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हौं । बैंक असार मसान्तमा मर्जर भयो साउनदेखि कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने त्यो प्राथमिकतामा परेन । दुई संस्था मर्जर हुँदा फरक फरक नीति, फरक कार्यशैली देखियो । त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न नै केही समय लाग्यो । अहिले बैक नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यसै अनुसार कर्मचारी पनि तयार भएका छन् । आगामी त्रैमासिक देखि आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गर्छौं । विकास बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशतभन्दा माथी जानुपर्छ र सोही अनुरुप विस्तार गर्नेछौं ।
अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंक एउटै कार्यक्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरिरहेका छन् । दुबै बैंक एउटै क्षे त्रमा गएर काम गर्दा काम गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?
वाणिज्य बैंकको ब्याजदर कम र विकास बैंकको बढी हुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । अहिले बाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न थालिसकेका छन् तर, हामीले सोभन्दा कम ब्याजदरमै कर्जा लिन आउ भनेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । अहिले दुबै स्तरका बैंक प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढेका छन् ।
हामीले काम गर्ने बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै हो । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले विदेशबाट सामान आयात गर्दा खोलीने एलसी बाहेक अन्य सबै काम गर्दै आएका छौं । अहिले २८ वाणिज्य बैंक र ११ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले बढी ब्याजदरमा निक्षेप राख्न पाएका छन् भने सस्तोमा कर्जा पाएका छन् ।
अहिले फेरी ग्राहकहरु तरलता अभावका कारण बैंकबाट कर्जा नपाईने भयो भन्ने त्रासबाट ग्रसित छन्,ब्याजदर पनि महंगो भयो भनिरहेका छन् । ग्राहकलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
बजारमा देखिएको निक्षेप तानातानको स्थिती हेर्दा बैंकहरुले कर्जा दिन छाडे कि भनेर शंका गर्नु स्वभाविक नै हो । तर, सबै बैंकमा त्यस्तो अवस्था छैन । उदाहरणकै लागि अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकले व्यवसाय गर्न चाहने ग्राहकलाई माग अनुरुप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छ । अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थालाई ठूला कर्जा विस्तार गर्न केही सोच्नुपर्ने बेला आएको छ तर साना तथा मझौला कर्जा विस्तारमा कुनै समस्या छैन ।